Somaliland iyo Somalia oo midba ka kale ku Eedeeyey Jebinta Qodobbo ka mid ah Heshiiskii layskula qaatay Wejigii koowaad ee Istanbul | Burco Media
Somaliland iyo Somalia oo midba ka kale ku Eedeeyey Jebinta Qodobbo ka mid ah Heshiiskii layskula qaatay Wejigii koowaad ee Istanbul
Istanbul (BM)-Guddiyada labada dhinac uga qayb-galaya wada-hadallada Somaliland iyo Soomaaliya, ayaa mid-ba midka kale sikulluul ugu edeeyay inuu jabiyey qodobo ka mid ah heshiiskii lagu gaadhay wejigii koowaad ee wada-hadallada Turkigu qabtay oo bishii April 13-keedii ku qabsoomay Magaalada Ankara.
Guddoomiye ku-xigeenka kowaad ee Baarlamaanka Somalilad Md. Baashe Maxamed Faarax iyo Xildhibaan Khaalid Cumar Cali oo ka mid ah ergada Dawladda Soomaaliya uga qayb-galaysa Wada-labada dhinac, ayaa xog-waraysi ay la yeelatay laanta Afka Soomaaliga ee VOA kaga warramay ajandeyaasha labada dhinac la tageen wejiga labaad ee wada-hadalladda Turkiga.
Guddoomiye ku-xigeenka kowaad ee Baarlamaanka Somaliland Md. Baashe Maxamed Faarax, waxa uu sheegay in wax ay doonayaan ay iska caddahay, taas oo uu tilmaamay in ajandaha ay ugu horeeyo ee Somalilanduu yahay Madax-bannaanida Somaliland, waxaanu yidhi. “Anagu waxaanu doonaynaa waa wax iska cad oo maaha wax qarsoodiya. Marka la isu-yimaado in laga wada hishiiyo ajandaha oo qole walba waxay wadato ay keento oo Guddida la dhex-keeno. Ajandahayagu waxaanu jecel nahay inuu iska cad yahay oo waxa ka kow ah Madax-bannaanida Somaliland wixii kalese ka hor dhicimaayo.”
Xildhibaan Khaalid Cumar Cali oo ka mid ah Ergada Soomaliya uga qayb-galaaya wada-hadallada oo la weydiiyey sababta looga war-wareegayo haddiiba Somaliland ajandaheeda wada-hadallada ee ugu weyn yahay go’aan ka gaadhista madax-bannaanida, ayaa ku jawaabay, “Wax walba waxay leeyihiin aas-aaskii ayaanu hadda dhisaynaa. Sababtoo ah muddo 20 sanno ah ayay wallaalaheena Somaliland runtii ku dedalayeen inay helaan goosasho Madax-bannaan. Anaguna intaas waxaan lahayn wallaalaheen inagama tagikartaan oo waanu idiin baahan nahay oo aynu wada fadhiisano oo aynu ka wada-shaqayno midnimada Ummadda Soomaaliyeed, markaa hadafka ugu wayn waa midow-gii labada dhinac sidii loo helilahaa, lakiin midowgii maanta wax walba waxa dhicikarta in laga wada-hadli-karin, lakiin xilli danbe laga wada-hadlikaro.”
Guddoomiye Baashe Maxamed Faarax oo isagana hadalka la siiyey, “Wasiirka arrimaha debadda ee Turkigu isaga ayaa shirka noo furay inkasta oo uu mash-quulsanaa oo uu meel adayey. Labada Wasiir qolo walba waxay rabtay way sheegatay. Anagu waxaanu sheegnay in qodobadii Ankara lagu kala saxeexday in qodobadaas ay dawlada Soomaaliya jabisay iyo wixii aanu u soconay inay tahay Madax-bannaanida Somaliland ayuu Wasiirka ganacsiga Maxamed Cabdillaahi Cumar ayaa halkaas ka akhriyey iyaguna way shegeen waxay u socdeen oo taasi waxay ahayd furitaan oo kaliya,”ayuu yidhi Baashe Maamed Faarax.
Baashe Maxamed Faarax waxa uu ku eedeeyey Somalia inay jabisay qodobbadii layskula qaatay wareeggii hore ee wada-hadallada, waxaanu yidhi, “Waxay jabiyeen qodobka todobaad oo shalayna (doraato), waanu cadaynay immikana waanu cadaynaynaa oo wixii aanu ku hishiinay waxbaa ka jabay. Markaa wada-hadalada iyo ajandaha wixii lagu hishiiyey in laga hor dhicin ee barito inaad sugtaan ayaa fiican.”
Haseyeeshee, Xildhibaanka Baarlamanka Somalia oo la weydiiyey waxa jira Eedaymaha Somaliland, aya ku dooday inay hayaan caddaymo muujinaya inay Somaliland jabisay qodobbo ka mid ah Heshiiskaa, waxaanu yidhi, “Wallahay Nin walba haddii uu dhinaca kale ku riixo waa dhibaato sababtoo ah anagu cabashada aanu qabnay midda ugu wayn ayay ahayd Jabinta qodobka iyo arrimaha ay noo gaysatay anaga iyo shacabkeenaba . haddii Dawlada federaalka ah lagu edeeyo inay jabisay qodobadaas, anagu waxaanu haynaa iyadoo fiid-yaw ah oo baratikal ah ciddii qodobadaas jabisay. Waayo ergadii in qaar ka mid ah ay jabiyeen ayaa anagu miiska soo saaraynaa. Markaa doonimaayo inaan sifaahfaahsan aan immika uga hadlo ee muhiimadu waxa weeye Miiska wada-hadalka.”
Haseyeeshee, eedaymahaas waxa jawaab ka bixiyey Guddoomiye Baashe, “Arrinta duulimaadyada Waxa weeye anaga hawo isku kayo jirtaa majirto oo anaga ayaa xukuna hawadayada, kaasina maaha qodob la jabiyey. Ergaduna may jabin oo anagu qodobka aanu haysano waxa jabiyey Madaxweynaha Soomaaliya,” ayuu yidhi.
Dhanka kale, waxa Guddoomiye Baashe iyo Xildhibaan Khaalid la weydiiyey qodobbada kale ee ajandaha ugu jira labada dhinac kulankooda shalay bilaabmay kuwaas oo ay ka mid yihiin inay la isla meel dhigo khilaafka dhanka maamulka hawada ah.
Guddoomiye Baashe oo ka jawaabaya su’aal laga weydiiyey arrintan, ayaa yidhi, “Anaga yaa Hawadayada iska leh. Soomaaliyana kala-tashan mayno oo anaga ayaa Hawadayada xukunna, iyagaana hawadayadii soo galay oo jabiyey, markaa anaga ayaa hawadayada leh oo cid aanu u daba fadhiisanaynaa majirto. iyagaana jabiyey oo yidhi Hawada Somaliland anaga ayaa xukuna,. Markaa hawadayada Un-ta, Cid kale iyo Dawlad kale toona kala tashan mayno.”
Xildhibaan Khaalid oo ka jawaabayey su’aal laga weydiiyey arrintan, ayaa yidhi, “Ajandayaashan noo yaala waxa ku jira qodobo muhiima oo loo baahan yahay xilliyadan aanu wada joogno inla isla meel dhigo.”
Si kastaba ha ahaatee, Qodobbada ugu muhiimsan ee wejiga labaad ee wada-hadallada shalay furmay la filayo inay labada dhinac ka wada-hadlaan, waxa ka mid ah khilaafka ka taagan dhanka maamulka hawada ee Qaramada Midoobay dhowaan ku wareejisay Dawladda Somaliya, arrintaas oo noqon karta qodobka ugu muhiimsan ee labada dhinacba saamaynta xooggan ku leh isla markaana ah ku soo korodhay siyaasadda labada dal intii ka dambaysay wejigii hore ee wada-xaajoodka oo magaalada Ankara ee Turkiga ay ku kulmeen Weftiyo ay kala hoggaaminayeen madaxweynayaasha Somaliland iyo Somalia.